Shiinaha warshad leexinta Shiinaha iyo soo saarayaasha | Lead
1.all-wareega 360 soosaarida wax soosaarka koox-kooxeedku wuxuu joojiyaa shaqa-socodka, awood u siinta quudinta otomatiga tooska ah, quudinta otomaatiga ah, goynta otomaatiga ah, hawlgalka gudbinta otomaatiga ah.
Isticmaalka KASRY Nesting system programme oo ah aalad barnaamij weyn, barnaamijka barmaamijka softiweerka AUTOCAD aasaasiga ah, fudud, garaaf iyo dareen leh, muuqaalka hodanka ku ah, wuxuu si weyn kor ugu qaadi karaa waxtarka hawlgalka.
3.High-dhamaadka codsiyada goynta robotka jilicsan ee seddex-geesoodka ah, si loo gaaro howlaha jarista bevel, tuubada iyo tooshka iyadoo la adeegsanayo shaqada meelaynta adeegga.
Wuxuu jari karaa birta kaarboon, birta aan lahayn, naxaasta, aluminium iyo tubooyinka kale iyo astaamaha, sida: tuubada, tuubada, tuubada oval-ka, tuubada qaab-dhismeedka, H-beam, I-beam, xagal, kanaal, iwm. noocyo kala duwan oo dhuumaha lagu farsameeyo qaab dhismeedka xogta, warshadaha dhismaha maraakiibta, qaab dhismeedka shabakadda, birta, injineernimada badda, dhuumaha saliidda iyo warshadaha kale.
CNC Turning waa qaab isku dhafan oo faahfaahsan oo lagu abuurayo qaybo iyo qaybo gaar ah iyadoo la adeegsanayo lathe. Kumbuyuutarka Tirada Kombuyuutarka (CNC) leexintu waa xirfad sare, habka injineernimada sax.
Waa maxay qaybaha u baahan tahay CNC jeedin?
Su'aal kama taagna in Milling CNC iyo CNC Turning ay yihiin geedi socodyo aad u kala duwan oo kiisaska badankood ku dhammaan doona natiijooyin gebi ahaanba ka duwan. Xarumaha CNC waa kuwo ku habboon mugga gaaban iyo gaar ahaan noocyada iyo qaybaha ka hooseeya 2.5 ”halka xarunta leexashadu ay awood u yeelan karto inay ka shaqeyso qaybo ka sarreeya 2.5” OD, waxay u baahan doonaan in shaqsi ahaan loo hubiyo oo ay ku xiran tahay mugga qaybaha la soo saarayo, waxay saameyn sare ku yeelan kartaa qiimaha wax soo saarka. Sidoo kale, haddii qaybtu ka yar tahay 1.25 "OD, rogitaanka ma noqon karto ikhtiyaarka lagu soo saarayo qaybtaas. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado in qodobka ugu weyn ee go'aaminaya haddii gabalka ay soo saari karto CNC Turning uu yahay mugga. Mugga sare inta yar ee ku habboon qaybta ayaa ku habboon in lagu soo saaro iyadoo la rogo.
La kulan Mashiinnadayada
Mazakh hal dunmiiqa oo si dhakhso ah u beddelaya CNC lathe
La kulan Awoodeena
Dulqaad: Wareega iyo isku koobnaanta saxnaanta waxaa lagu gaari karaa +/- 0.005mm
Adkaanshaha dusha sare waxaa lagu gaari karaa Ra0.4
Qiyaasta cabbirka: Ballaca alaabta ceeriin ee wareegsan laga bilaabo 1mm ilaa 300m
Waxyaabaha: Aluminium, Bir, Bir daxal lahayn, Titanium, naxaas, iwm
OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa
Muunado ayaa la heli karaa ka hor inta aan la soo saarin tiro
Adeegyo dheeraad ah:Mashiinka CNC, CNC leexinta, Ku tumashada birta, Birta xaashida, Dhamaaday, Qalabka,, iwm
Hore: Milling CNC
Xiga: Qaybo naxaas ah